कलेजो स्वस्थ राख्न के खाने ? – Etajakhabar
कलेजो स्वस्थ राख्न के खाने ?
काठमाडौँ, तरकारीमा हाल्ने कीटनाशक औषधि, प्रदूषण, दूषित खानेकुरा, शरीर भित्रको रासायनिक प्रक्रिया आदिले गर्दा कजेलोमा विषादी जम्मा हुने गर्छ, जसले कजेलोको कार्य क्षमतामा ह्रास ल्याउने गर्छ ।
पाचन प्रक्रियामा सघाउ पु¥याउनेदेखि शरीरलाई विकाररहित बनाउनेसम्मका काममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कलेजोलाई विकाररहित बनाई स्वस्थ अवस्थामा राख्न यस्ता खानुकुरा खानुपर्छः चुकन्दर र गाजरः गाजरमा ग्लुटाथियोन नामक प्रोटिन पाइन्छ, जसले कजेलोमा जम्मा भएका विकार बाहिर फाल्न मद्दत गर्छ । चुकन्दर र गाजरमा बेटा क्यारोटिन, प्लान्ठ फ्लाभोनोइड्सजस्ता तŒव पनि पाइन्छन्, जसले कलेजोलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ ।
गोलभेँडाः गोलभेँडामा पर्याप्त मात्रामा ग्लुटाथियोन पाइन्छ, जसले कलेजोमा विकार जम्मा हुन दिँदैन । यसमा पाइने लाइकोफेन नामक तत्वले स्तन, छाला र फोक्सोको क्यान्सर हुने जोखिमलाई पनि कम गरिदिन्छ ।
भोगटेः भोगटेमा भिटामिन सी र एन्टिअक्सिडेन्ट पर्याप्त मात्रामा हुन्छ । यसले कलेजोलाई विकाररहित गर्न सघाउ पु¥याउने रसायनहरूको उत्सर्जनलाई तीव्र गरिदिन्छ र कलेजो विकाररहित हुन जान्छ ।
पालुंगोः पालुंगो सागमा ग्लुटाथियोन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ, जसले कलेजोलाई विकाररहित सफा अवस्थामा राख्न मद्दत गर्छ ।
कागती प्रजातिका फलफूलः कागती, सुन्तला, मौसमजस्ता फलफूलमा भिटामिन सी प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । यसले कलेजोलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ । यस्ता फलफूलमा पाइने भिटामिन सीले कलेजोमा जम्मा भएका विकारलाई पानीमा घुलनसिल गराइदिन्छ, जुन पिसाबबाट शरीरबाहिर निस्किन्छ ।स्वास्थ्य खबरपत्रिका
बन्दाकोपीः बन्दाकोपी खानाले कलेजोमा जम्मा भएका विकार पिसाब, पसिनाबाट शरीरबाट जाने प्रक्रिया तीव्र हुन्छ ।
बेसारः कलेजोलाई विकाररहित गराउने मसलामध्येमा पर्छ, बेसार । बेसारले कलेजोका विकार शरीर बाहिर जाने प्रक्रियालाई सहज र तीव्र गरिदिन्छ ।
ओखरः ग्लुटाथियोन, ओमेगा–३ फ्याट्टी एसिड, एमिनो एसिडजस्ता कलेजोलाई स्वस्थ राख्ने पदार्थ ओखरमा प्रचुर मात्रामा पाइन्छन् र जसले कलेजोलाई स्वस्थ राख्छ मद्दत गर्छन् । एभोकाडोः ग्लुटाथियोन नामक कलेजो सफा राख्ने तŒवको अर्को मुख्य स्रोत एभोकाडो हो । एभोकाडो खानाले कलेजो स्वस्थ रहन्छ ।
स्याउः स्याउमा पेक्टिन र अन्य रसायन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ, जसले कलेजो र पाचन नलीमा जम्मा भएका विकारलाई शरीर बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ ।
लसुनः लसुनमा पाइने एलिसिन र सेलिनियमजस्ता तŒवले कलेजोलाई स्वस्थ र विकाररहित अवस्थामा राख्न मद्दत गर्छ ।
हरिया सागपातः हरिया सागपातमा क्लोरोफिल नामक तŒवको मात्रा उच्च हुन्छ, जसले शरीरभित्र जम्मा भएका विकार र फोहोर पदार्थ, अक्सिडेन्टलाई शरीरबाट निकाल्न मद्दत गर्छ ।
ब्रोकउली र काउलीः ब्रोकउली र काउली खानाले शरीरमा ग्लुकोसिनोलेट नामक तŒवको उत्सर्जन बढ्न जान्छ जसले कार्सिनोजेन्सलगायत विकारलाई शरीरबाट बाहिर निकाल्छ ।
कुरिलोः कुरिलो खानाले कलेजो र मिर्गौला दुवैमा जम्मा भएका विकार कम हुन्छ । ग्रिन टीः ग्रिन टीमा एन्टिअक्सिडेन्ट प्रचुर मात्रामा पाइन्छ, जसले शरीरभित्र जम्मा भएका अक्सिडेन्टलगायत विकारलाई बाहिर निकाल्छ ।
जैतुनको तेलः जैतुनको तेल उत्तम खाद्यमध्येमा पर्छ । यसले कलेजोमात्र नभई समग्र शरीरमा जम्मा भएका विकार र विषादीलाई शरीरबाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, मंसिर ०९, २०७३ समय: ९:१२:३५